Conversica: La Xiriir, Hawlgal, Korin iyo U Qalmid Adeegsiga Kaaliyaha AI | Martech Zone
Talaado, Disembar 12, 2017 Jimco, Diisambar 15, 2017 Douglas Karr
Conversica waxay bixisaa ah kaaliyaha iibka otomaatiga ah waxaa ku shaqeeya softiweer sirdoon macmal ah. Kaaliyaha wuxuu u shaqeeyaa sida kaaliyaha iibka aadanaha, isagoo gaarsiinaya mid kasta oo ka mid ah hogaamiyaashaada isla markaana mid kasta oo ka mid ah ku lug yeelanaya wadahadalka aadanaha. Dadku way jecel yihiin maxaa yeelay kaaliyaha waa qof shaqsiyeed, saaxiibtinimo leh waxna ka qabta, oo si dhaqso leh ugu xiraya bini'aadam caawin kara.
Waxaan joognaa gu 'AI. Waxaan u maleynayaa shirkad kasta, kacaanka cilmiga sayniska inuu asal ahaan wax ka badali doono sida aan u socodsiino ganacsigeena maxaa yeelay waxaan heysanaa kumbuyuutarro naga caawinaya sida aan ula macaamileyno macaamiisheenna. Agaasimaha Salesforce Marc Benioff
Caawiye kaaliyaha ayaa laxiriira oo uqalma dhamaan hogaamiyaasha si iibiyayaashu ay diirada u saaraan iibinta halkii ay ka kobcin lahaayeen. Otomaatigani wuxuu awood u siinayaa hogaamiye kasta in lala socdo isla markaana jawaab celinta waqtiga-dhabta ah la qabto.
Sidee Wakiilka Iibinta AI-ku shaqeeya u shaqeeyaa:
Kaaliyahaaga iibka otomaatiga ah hawlgeliso macaamilka isla marka uu hoggaanka yimaado. Celcelis ahaan, 35% dhammaan hogaamiyayaashu waxay u jawaabaan kaaliyaha iibka otomaatiga ah. Kaaliyaha iibka otomaatiga ah emayllada gadaal iyo gadaal leh hogaaminta, kobcinta mid kasta iyo u sheeg shaqaalahaaga iibka ah marka dulsaarku u beddelo damac inuu iibsado.
Kaaliyahaaga iibka otomaatiga ah hel hoggaamiyeyaasha doonaya wicitaan wuxuuna helaa nambarka ugu fiican. Iyaga oo leh software sirdoonka macmalka ah kaaliyahaaga iibka otomaatigga ah wuxuu tilmaamayaa hogaamiyaasha diyaar u ah inay ku lug yeeshaan hawsha iibka waxayna helayaan lambarka taleefanka ugu fiican iyo waqtiga ugu fiican ee iibiyahu soo wici karo. Celcelis ahaan, boqolkiiba 35 hoggaamiyeyaasha waxay siiyaan kaaliyaha iibka otomaatiga lambar taleefan oo dheeri ah, badanaa taleefanka gacanta. Tan ugu muhiimsan, markay shaqaalahaaga iibka ahi soo wacayaan, hoggaanka ayaa filaya wicitaankooda.
Kaaliyahaaga iibka otomaatiga ah ku lug yeesho jihooyin qarsoodi ah oo iibiya. Kaaliyahaaga iibka otomaatigga ah wuxuu sidoo kale ka heli karaa fursado iib oo cusub jihooyinka taagan, kordhinta iibka iyo helitaanka qiimo badan oo ka yimaada hoggaankaaga jira. Ku dhowaad 60% hoggaamiyeyaasha dib-u-habeynta tiknoolajiyadda AI ee Conversica ayaa wali suuqa ku jira. Kaaliyahaaga dal-ku-galka ah ee AI ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa inuu iskutallaab ku iibiyo alaabada kale oo uu ku soo ururiyo jawaab celin ku saabsan qancinta macaamiisha
Tayaynta otomaatiga suuq-geynta CRM xal. Kaaliyahaaga iibka otomaatigga ah ayaa loo isticmaali karaa si loo wanaajiyo tayada raadadka isla markaana si fiican loo aqoonsado fursadaha iibka ee ka yimaada hoggaamiyeyaasha ay abuureen ololeyaasha jiilka ee baahida wata qalabka otomaatiga suuqgeynta sida Pardot Suuqa ama Eloqua.
Faa'iidooyinka Wakiilka Iibka ee AI-ku shaqeeya waxaa ka mid ah:
Ka xoree wakiiladaada iibinta dhabta ah - Kaaliyaha iibka otomaatigga ah ayaa kala soocaya hoggaamiyeyaasha wanaagsan iyo kuwa dhintay, sidaas darteed wakiillada iibku waxay la hadlaan oo keliya rajooyinka doonaya inay la hadlaan.
La soco hogaan kasta - Conversica waxay soo saartaa wax badan at fiidmeerta ee loogu talagalay iibkaaga iibka - oo leh hogaamin cusub iyo mid duug ah - oo markaa si weyn kor ugu qaadaya tirada heshiisyada xiran.
Hel jawaab celin daacad ah - Kaaliyahaagu waa mid la soo dhaweyn karo, in rajadu aad uga dabacsan tahay oo daacad ka tahay jawaabahooda marka loo fiiriyo a iibiye.
Soo ururi sirdoonka ganacsiga ee muhiimka ah - Filashadu ma ahan oo keliya inay si fudud uga jawaab celiso, waxay sidoo kale la wadaagaan macluumaad muhiim ah sida lambarrada taleefannada, xilliyada ugu wanaagsan ee la wacayo, iyo ujeeddada wax iibsashada.
Hagaaji habka iibkaaga - Kaaliyahaaga iibka ayaa dib u raacaya rajooyinka mar labaad ka dib markii aad u dhiibtay iibiyaha iibka - si uu u bixiyo aragti maamul iyo qanacsanaanta macaamiisha.
Hawlgeli kaaliyaha iibka oo si buuxda u tababaran - Kaaliyahaaga iibka wuxuu yimid si buuxda oo tababbaran, si buuxda u dhiirrigeliya, oo horeyba ugu qalabeeyay waayo-aragnimada laga helay malaayiin wadahadal macaamiil ah.
Isku day Conversica si bilaash ah Eeg Live Conversica Demo
Tags: aiai caawiyeai caawiye kaaliyahaai kaaliyaha iibka dalwaddiisirdoonka macmalwada hadaldashboardcodkarnimosuuqocafiskaaliyaha dalwaddiikaaliyaha iibka dalwaddiikooxda iibka dalwaddii